Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: September 2016
Posted by Hasan Ismail at 4:29 PM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 3:47 PM No comments:
#OromoProtests Qananiisaa Baqqalaa ummata isaatiif aantummaa akka hin qabne har'aa mitii gaafa Asallaa jiruu nan beeka
Tarii wanni xiqqoo na ajaa'ibe yeroo atileetonnifi artistoonni alagaatuu ummata Oromoo fixamaa jiruuf nahanii mormii agarsiisan kanatti Wayyaanee cinaa dhaabbate as bahuu isaati. Qananiisaan osoo gara Jarmanuu hin deemin waan akkanaa godhuuf heda hamiin jettu numa turte. Kanas kan godhe dantaa diinaggeetiif akka taate himama. Yoon waan mootummaan naan jettu dide qabeenya keyyatu gaaga'ama ilaalcha jedhu irraayi jedhan. Wanni inni irraanfate qabeenyi inni qabu cufti Tigraay osoo hin taane Oromiyaa keessa jira. Lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa buqqaasan gubbatti waa hunda kan jaarratte. Qananiisaan Alaamuddiinifi abbootii qabeenyaa biroo kanneen Oromiyaa irratti duroomanii Wayyaanee cinaa dhabbachuun ummata Oromoo ficcisiisaniin addatti laalalmuu hin danda'u. Wanni inni godhuuf yaale haqa Oromoo mukaaf citaan ragaa bahaafi jiru sadarkaa addunyaatti dhoksuudha. Milkaawuu dhabe malee, dhugaa Fayyisaa Leellisaa ragaa bahe san dhokqqee faaluudha.
Maarree inni dantaa diinaggeetiif jecha diina Oromoo yoo filate, Wayyaaneefi ummata Oromoo jidduu kan diinaggeen caalaatti isa fayyadu agarsiisuun barbaachisaadha. Wayyaaneefi Oromoo jidduu kan isaa fayyaduufi kasaarsuuf humna irra qabu barachuu qaba. Mee qabeenya inni Oromiyaa keessaa qabu maal faadha, eessatti argama hoo? Tarkaanfii fudhatamuu malu odeeffannoo barbaachisaa sassaabannee walitti deebina
Posted by Hasan Ismail at 8:08 AM No comments:
Fakkeenni Fokkataa fi Xuraayaan ilaalcha Uf-tuulummaa fi dhiphummaa Wayyaanema mataa isiiti!
(Aman Kedir Kamsare irraa)
The typical and the worst manifestion of Chauvnism and narrow-nationalism is the TPLF regime itselfWayyaanonni saalaa fi safuu waan jedhamu hin beekan. Nyaara isaanii haadatanii ija isaanii sooqiddaan dhiqatanii kijibuun amala dhaabbataa polotikaa Wayyaanota ta’ee jira. Sochii fi humna polotikaa kan ummata Oromoo keessaa dhalatee migaa fi bilisummaa isaa gaafatu dursanii dhiphoo fi dhiphummaan yakkan. Sochii fi humna polotikaa kan ummata Amaaraa keessaa dhalatu kamiyyuu uf-tuuluimmaan hadheessuun aadaa polotikaa Wayyaanotaa ta’ee baratamee jira. Sochii ummata Oromoo kan isaan hudhee qabe ufirraa faccisuuf jecha dhiyeenna kana leenjii jechuun barattootaa fi barsiisota Oromoo dargaggoo oliif gadi agaabalaa jirti Wayyaaneen. Leenjiin Wayyaanotaa kunis bakka sadi gurguddatti qoodama: abbaan ilaalcha qulqulluu dhugaa sabboonummaa warraaqxummaa (revolutionary democracy), wayyaanota, abbaan ilaalcha uf-tuulaa ummata Amaaraa, mallattoon dhiphummaa sabaa Oromoo gootee hiriirsitee jirti. Leenjiin wayyaanotallee amaraa uf-tuulummaa irraa dhiquu, Oromoo ammo dhiphummaa irraa qulqulleessudha. Polotikaa Wayyaanota keessatti waan lama ifaa ta’uu qaba. Tokkoffaa Wayyaanonni osoo beekan dunuumfatanii kijibuu aadaa jireenna isaanii godhatanii jiru. Yookin hiyyeeyyii beekumsa siyaasaa waan tayaniif humna booddessaa (retrogressive force) ta’anii uf-duuba malee fuul dura laaluu dhabanii jiru. Haala qabatamaa amma biyya Itoophiyaa keessa jirutti fakkiin fokkataa fi bushaawaan ilaalcha uf-tuulummaa fi dhiphummaa sabaa mata isaanii Wayyaanota malee kan biraa ta’uu hindanda’u. Akka seenaa warraaqsa ummata addunyaa galmeessutti uf-tuulummaa fi dhiphummaa addaan baasanii laaluun hindanda’amu. Bara Wayyaaneetiin dura uf-tuulummaa fi dhiphummaan bifa ilaalchaatiin marsaa polotikaa qarayyootaa keessatti uf-muldhisaa turuun isaa waan haalamuu miti. Bara Wayyaanotaa uf-tuulummaa fi dhiphummaan calaqqee ilaalchaa (ideological tendency) tawuun isaa hafee dhiphummaa fi uf-tuulummaan ilaalchaa fi immaammata mootummaatti jijjiirame. During TPLF Cahauvnism and narrow nationalism became state and official policy and ideology of the regime). Bara wayyaanotaa ilaalchi uf-tuulummaa fi dhiphummaa imaammataa fi ilaalcha mootummaa beekamaa tawuu bira dabree aangoo dinaggee, polotikaa fi humna waraanaa kophatti dhuumfatee waggoota dabran 25 uf-tuulummaa fi dhiphummaa hiriyaa hinqabneen ummatoota biyyichaa bitaa fi ukkaamsaa ture. Jiras. Sirni abbaa-irree TPLF uf-tuulummaa fi dhiphummaa saba tokkoo qofaa irratti ijaarame garamitti deema gaafii jettu deebisuun siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti murteessaa ta’aa dhufee jira. Akka seenaan biyyoota adda addaa raga bawutti sirni uf-tuulummaa fi dhiphummaa gita bittuu saba tokko irratti hundaaye imaammataa fi ideologii beekamaa godhate dhumaaleettin isaa gara fashistummaa abbaa-irree waraanaatti (fascist military dictatorship) cehuun isaa waan ooluu hin fakkaatu. Yoo qabsoo ummatootaatiin hanqifame malee!Walumaa gallatti fakkeenni fokkataa fi dhukkaawaan ulaagaa uf-tuulummaa fi dhiphummaa guutee aangoo biyyichaa hallanyummaan dhunfate Wayyaaneen alatti kan biraa ammatti Impaayera Itoophiyaa keessa hinjiru. Sirni abbaa irree imaammataa fi ilaalcha dhiphummaa olaantummaa waraanaa fi diinaggee saba bicuu irratti ijaarame qabsoo ummatootaatiin buqqisanii sirna bilisummaa, demokiraatawaa fi qixxummaan ummatootaa keessatti mirkanaawe ijaaruun gaafii belbeltuu ammayyaati!Fakkiin fokkataa fi xurraayaan polotikaa uf-tuulummaa Waayyaaneedha!Fakkiin fokkataa fi hajaawaan dhiphummaa saba tokkoo irratti ijaarame Wayyaaneedha!
Posted by Hasan Ismail at 3:52 AM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 11:28 AM No comments:
#OromoProtests Juneeydii Saadoo gara miidiyaatti as bahuun mariifi falmii jabaa banee jira
#OromoProtests Juneeydii Saadoo gara miidiyaatti as bahuun mariifi falmii jabaa tanee jira,
Atakaaroon kun qalbii ummataa qabsoo irraa hamma tokko waan facaaasuuf gariin keenya yaaddayuun ni mul’ata. Yaaddoon kun naaf gala. Garuu mariifi falmiin kun har’a sababa Juneeydiitin haa ka’uu malee turus ummanni Oromoofi mooraan qabsoo isaa waanuma itti dhufuuf deemtuudha. Kunis ilmaan Oromoo OPDO keessatti aangoo qabatanii meeshaa diinaa ta’anii turaniifi ammas jiran akkam goona kan jedhuudha.
Waan takko garuu ammumarraa ifa godhuun barbaachisaadha. Namni miseensa OPDO ta’ee sirna Wayyaanee tajaajile hundi yakka sirni sun raaw'ateef itti gaafatama. An gaafas hin beekne, hin dhageenye, aangoo dhugaa na harkaa hin jirtuun itti gaafatamummaa jalaa nama hin baasu ( Ignorance does not absolve one from responsibility). Qondaalonni kun yakka hojjatamaa tureefi jiru keessatti takkaa suduudaan hirmaatanii jiran; ykn osoo arganii itti dhiisan. Kanaaf balleessaa irraa of qulqulleessuu hin danda’an. Akka badii isaanii kanaaf itti adabaman garuu waan boru heeraafi seeraan murtaaye hojitti hiikamu ta’a. Har'a qondaalonni kun badii isaanii amananii dhiifama gaafachuun mirga isaaniiti. Dhiifama san namuu mata-matatti irra fudhachuufi dhiisuu danda’a. Garuu ummanni Oromoo waloon gaafii dhiifamaa irratti deebii kennuuf yeroon ammaa miti. Sirni kun erga kufee booda akkuma biyyoota biroo qaamni ( komishinii) yakka sirna abbaa irree keessatti raaw’atame qoratee, yakkamtoota irratti murtii adabbii (prosecute) ykn dhiifamaa ( amnesty) dabarsu dhaabbachuu qaba. Kanaaf ammo ogeeyyii seeraa dhimmaa transitional justice irratti barnoota guddaa horatan waan qabnuuf ammumarraa itti qophaayuu eegaluu qaban. Waa hundaafuu mariifi falmiin dhimma kanarratti godhamu itti fufuun hammeenya hin qabu; garuu miira tasgabbaa’een haa godhamu.
Posted by Hasan Ismail at 8:37 AM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 10:44 AM No comments:
#OromoProtests #Boycottpaarlaamaa2009, #Caffeelagachuu
OromoProtests Boycottpaarlaamaa2009, Caffeelagachuu
(Tsegaye Ararsa irraa)
Akka seeraa fi heeraatti paarlaamaa ykn bakka bu'oota uummataa jechuun akkuma maqaa isaa qaamaa mootummaa keessatti uummata bakka bu'u jechaadha.
Kan jechuun bakka bu'oonni uummataa jechuun karaa kamiinuu mirgaa fi faayidaa uummataa giddu gala godhachuu qabu.
Kan sirna kana keessatti argaa jirru garuu faallaa kanaati. Paarlaamaan ykn bakka bu'oonni uummataa sirnichaan ijaaraman akka maqaa isaanii uummata kan bakka bu'an osoo hin taanee uummata keessa taa'anii sirnicha warra tiksaniidha, uummata keessaa sirnicha warra bakka bu'aniidha. Dhibee hawaasaa osoo hin taanee sirnicha jiraachisuuf alkanii guyyaa warra hojettaniidha.
Mootummaan ADWUI filannoo yeroo darbanee bara 2007 itti ciniinnatee safuu tokko malee mormituun ykn ilaalcha addaa namni qabu akka bakka bu'aa uummataa ykn miseensa paarlaamaa hin taane kan murteessee harka dhibba miseensota isaatiin guutuu kan barbaade sagaleen uummataa guutumaan guutuutti akka ukkaamamu waan barbaadeefi.
Paarlaamaa sirna kana keessaa miidhaan uummata daran akka jabaatu yoo godhan malee waanti eegnu tokko hin jiru.
Yeroo darbe gabaasa mootummaan wayyaanee miidhaa Oromiyaa keessatti qaqqabe qoradhe jedhee paarlaamaa kanaaf dhiyeessee safuu tokko malee harka guutuun mirakeessuufii isaaniu nj yaadanna.
Kana jechuun paarlaamaa kun bakka bu'oota mootummaa wayyaanee malee kan uummataa miti.
Osoo uummanni kun lafarraa duguugamee dhumeeyyuu ilaalchaa fi ejjennoo wayyaanee ala qabachuu hin danda'an.
Bara haaraa kanatti paarlaamaan kun boqonnaa gannaa xumuranii hojiitti galuuf qophii irra jiru. Haata'u malee waanta addaa irraa hin eegnu.
Kanuma paartiin ADWUI irratti dubbachaa ture mirkaneessuu. Harka, baasanii deeggaruudhaaf qophaawanii jiru.
Uummanni keenyaafi biyyi keenya waan keessa jiru ammoo ni beekna.
Hanga yoomiitti paarlaamaan kun nurratti sirba?
Paarlaamaa kanaaf carraa sadi kennuufii qabna.
1. Yoo dhuguma akka maqaa isaanii uummata bakka ba'an ta'e haala uummata keessa jiru osoo hin jallisiin aantummaa uummataa agarsiisuun uummata cinaa dhaabbachuu qabu. Kana jechuun ajandoota mootummaan wayyaanee akka mirkaneessan itti fiddu harkaa kuffisuu qabu.
2. Yoo mootummaa wayyaanee mormuu hin dandeenye, kan mootummaan wayyaanee itti fiddu harkatti kuffisuuf of hin qopheessine ta'e, walgahuu hin qaban. Paarlaamaan kun diigamuu qaba malee dhiiga uummataa irratti sirbuu hin qabu.
3. Filannoo armaan olii kennameef itti kan hin fayyadame yoo ta'e, miseensonni paarlaamaa kanaa hundi isaanii ajjeechaa, dararama, hidhaa fi badii mootummaan wayyaanee uummata keenya irratti fudhachuu jiru adda durummaan akka itti gaafataman of qopheessuu qabu. Badii mootummaan wayyaanee dalagaa turee fi ammas dalagaa jiru akka itti amananitti fudhatamee miseensonni paarlaamaa 547 hundi isaanii maqaa isaaniitiin himmanni akka itti banamu ammumaa qabanii of qopheessuu qabu.
Carraawwan sadan kennameef akka itti fayyadamuu danda'an waamichi ifaan ifatti karaa miidiyaa hwaasummaa akka isaan qaqqabu gochuu dirqama lammii hundaa ta'a.
Injifannoon kan saba bal'aati!
Posted by Hasan Ismail at 3:42 AM No comments:
(Aman Kadir Kasmare irra)
Barruu ammaan duraa keessatti yaada aangoon Polotikaa haroo xiqqoo baaltokkee (monolithic source) irraa madda jedhu qoratne. Qu’annoo fi iyyaafannoo kana keessattis ilaalchi baaqqeen kun amaloota gurguddoo armaa gadiitiin akka calaqqisu hubanne. Isaanis: aangoon polotikaa (irreen mootummaa) tuuta xiqqoo fiixxee sirna mootummaa qabattee cunqursitu irraa madda, hiree fi hegereen ummata baldhallee jireenna tuuta xiqqoo (gita-bittuu) tana irratti rarra’a, aangoon murna xiqqoo harkatti dhuumfatamte utubaa sibiilaati, hinjijjiiramtu , aangoon polotikaa afaan qawwee qofaa irraa madda, dhugaa fi karaan qajeelaan kiyya qofaadha, yaadaa fi karaan biraa dhara kanneen jedhan ture. Fakkiin fokkataa fi harguugamaan yaada balashee kun murna TPLF tawuu isallee mirkaneeffanne.
Qorannoo fi qu’annoo ardhaa keessatti yaada faallaa kanaa kan aangoon polotikaa muummee sobbooqqoo-dachaa darabee (polylithic source) irraa madda jedhu babbaysina.
Warri ilaalaacha sobbooqqoo aangoo polotikaa ummatatti yookiin saba baldhaatti amanan akkuma lagni tokko muummee irraa maddu aangoon polotikallee ummata irraa madda jedhu. Hayyoonni yaada kana qoratan aangoo polotikaa ummataa maanyaa bishaaniitiin (sea) walfakkeessanii laalu. Hayyuun falmataa Polotikaa qabsoo karaa nagayaa Ghandiin (biyya Indiyaa) akkana jedha: Namni laga-guddaa billawaan muru galaana san muree dhiigsuu hindanda’u. Inumaa laga muruun isaa hafee haka isaattuu foffottoqa.) jedha. Akkuma Wayyaaneen galaana ummata Oromoo muruuf osoo tattaafatu galaanni muramuu didee isa liqimse jechuudha. Akkuma laga tiillicha bishaanii keessa qurxummii fi bineensonni lubbuu qaban hedduun daakanii jiraatan maaynaa aangoo polotikaa ummataa keessas humnnoota aadda addaattuu dachaa-darabeen qooda iraa fudhata jedhu. Kanaafuu aangoon qabeenna dhuumfaa hallanummaan namoota yookiin gartuulee hagoon qabatamu osoo hintayin qabeenya yagutoo (common property) dhuumfata ummataa jala jiru jedhanii yaadu.
Yaadni sobbooqqoon aangoo polotikaa akka yaada baaltokkee «ummanni baldhaan murna abbaa-irree irratti irkatee jiraata» jedhanii hin amanan. Faallaa kanaatiin murna abbaa-irreettuu ummata baldhaa irratti irkatee jiraata, yoo ummanni baldhaan hayyamaa fi deggersaa isaa jalaa dachaafate murni abbaa-irree guyyaa tokkos ooluu hindanda’u jedhee amana.
Ilaalchi aangoon Polotikaa sobbooqqoodha jedhee yaadu akka yaadaa baaqqeetti (monolithic) aangoon utubaa sibiilaati jedhee hin amanu. Inumaa karaa biraatiin aangoon ni dhufa, ni jijjiirama, ni caccapha jedhee amana. Mootummoonnis ni dhufu, ni kufu jedhee amana. Garuu ummanni baldhaan bara baraan dhaloota irraa gara dhalootaatti osoo addaan hincitin jiraata.
Akka yaada balashee yaadni aangoo polotikaa sobbooqqoo jedhee amanu «aangoon afaan qawwee qofaa keessaa dhufa» jedhee hin amanu. Qawween deggersaa fi hirmaannaa ummataatiin alatti qoraan duwwaadhaa. Fakkeennaaf sochii ummanni Oromoo j’oota kudhan darbanii godhaa jiru yoo laallu dhugama qawween Wayyaanee kolkolee duwwaadhaa. Ilmaan Oromoo kanneen gootummaan hidhannoo qawwee malee mirga isaaniitiif falmataa jirantuu Wayyaanee hanga funyaanitti hidhate jilbiifachiisaa jira. Kanaafuu yaadni sabbooqqoo aangoo polotikaa aangoon dhugaa, tokkummaan dhugaa, qabsoon dhugaa bilisummaan waaraan fi demokiraasiin dhugaa hirmaannaa ummata irraa madda jedhee amana. Abdiin bilisummaa fi tokkummaa dhugallee namootaa fi murnoota polotikaa kanneen «nu tuu bilisa si baasa» jedhan osoo hintayin ummata baldhaa ijaaramee dammaqiinsaan qabsoo isaa geggeessu harka jirti jedhee yaada.
Ilaalchi sabbooqqoon aangoo polotikaa dachaa darabeetti amanu akka ilaalcha balasheetti aangoon gubbarraa qofaa gadi-lola’a (monolithic top-down homoginization) jedhee hin amanu. Aangoon polotikaa ummata baldhaa irraa maddee deebisee ummatuma baldhaa aangoo dhuumfachiisa jedhee amana. Fakkiin cululuqaan yaadaa aangoo Polotikaa Sobbooqqoo sirna polotikaa Gadaa Oromooti jennee fudhachuu ni dandeenna.
Itti fufa kufaa 3FFAA.
Aman Kedir Kamsare
Posted by Hasan Ismail at 4:44 AM No comments:
Seenaa gooticha oromo Jamal Harun akka armaan gadii kanatti dubbisa
''kan itti dhalatee goodina harargee Aanaa xuulloo Aradaa raakataafuraa nannawa magaalaa hirna Aabaa isaa Obboo Harun usoo fi Haadha isaa addee ashee muktar irraa bara 1985 A.L.H ti jamaal harun Abbaa dubara tokkoo yammu ta'u maqaanshee sabboontu jamaal jedhamti jamaal ammala isaatin kan nama hunda biratii jaalatamu fi nama hunda qiixee tookkon kan ilaaluudha jamaal ilmadha.jamaal ilma qootee bullaa waan ta'ef jirenya isaa haala rakko kessati dabarsee yemmu ta'u barumsa isaa kan egalee bara 1998 yemmuu ta'u osoo barachaa jiru hinqina maalaqaa waan qabuf kuttaa 6 barumsa aadaan kuttee hojjii dhunfaa egalee osoo hojjachaa jirani ijjole magaalaa hirna wajjin garee ummatani bara 2005 A.l.h gare dalaalootaa jedhani maqaa moggaasan hogganaan isaani kan amma waagaa 18 itti murame diinee Ahmed yemmu jedhamu jamaal mesansa ture san booda cimina isaa irraa ka'e kooree hojji qindessuttii ta'e. walgahi kan godhan toorbaan keessaa guyya tookoo ture inis guyyaa dilbaataa ture osoo akaniti hojjachaa jirani mottummaan abbaa irree gaamtaa isaaniti waan areef addaan diigee ammaas debiyaani bara 2006 A.L.H walittii deebiiyan yemmuu ta'u mallaqa hanga 600,000 walliqaban asirratii kan murteesan nama kenya kan hidhamee maallaqaan gargaaruu irrati waligalan yeroo kana baruma kana keessa guuyyaa ayyaana ximqataa ummani habashaa yemmuu salalee arabsan jamaal faan isaan chafaqaanii hotela cabsan sababa kanaan namni 7 yemmuu hidhamu inis keessaa tokko ture sababa kanaan waajjira polisii cabsani bahaan namni tokoo kessaa cabe qabamee inis moosiisaa adam kan jedhamu ture san booda jamaal dhokatee erga gaara galee hammaa araa barbadaamaa jira osoo barbaadamaa jiru hiriri ka'e san irrati waan arganif rasaasaan dhawani ajjesan waan nama ajja'ibu du'a isaa beekee galgala yemmu wajjin haasoofnu ani nin du'a du'us alaabaa harka qabadhee haa du'u jedhee akkasuma ganama du'e kun jecha isaa waan ta'ef haa galmaa'uf
Qabsaayaan ni kufaa qabsoon itti fufa!!
Posted by Hasan Ismail at 9:42 AM No comments:
Aangoon Polotikaa dhugaa eessaa madda?Aangoon Polotikaa dhugaa eessaa madda?
Barreeffama ammaan duraa irratti maalummaa fi gumaata aangoon polotikaa fi hawaasa keessatti qabu gabaabsnee laallee turre. Xiinxallaa kana keessattis hariiroo fi walitti hidhata aangoon polotikaatii fi Qabsoon diddaa nagayaa (Non-violent struggle) qabus mildhannee jirra. Barreeffama ardhaa keessatti muummee (source) aangoon polotikaa iraa maddu iyyaafanna (soqna) Aangoon Polotikaa dhugaa eessaa burqa gaafii jettu wirtuun deebisuu keennaan duratti aangoo polotikaa jechuunuu maal jechuudha gaafii jetti gabaabsinee mildhanna.
Akka hayyoonni polotikaa irra caalaan walii galanitti aangoo polotikaa jechuun humna ofiitii fi fira qabsoo ijaaranii humna diinaa dura dhaabbatanii, madaala humnaa jallisanii aangoo furtuu (key polotical power) gonfachuu jechuudha. Namootaa fi murnoonni aangoo polotikaa harkatti galfatanii jijjiirraa hawaasaa fi sirnaa fiduu barbaadan kamiiyyuu dura handhura aangoo polotikaa booji’uu qaban. Aangoo polotikaa gonfachuu jechuun ammoo aangoo mootummaa (state-power) fudhachuu jechuudha. Humniti aangoo furtuu mootummaa dhuumfate sirna biyyitti ittiin bultu diigee ijaaruu, imaammata tumuu fi dhaddacha heeraa walabaa utubee hegeree biyyichaa irratti murteessuu danda’a.
Humnootaa fi jaarmayoonni polotikaa bifa adda addaatiin gaafii haa dhiyeessan malee ijoon qabsichaa aangoo polotikaa amajaajii (mootummaa) abbaa-irree irraa fudhatanii ummata aangessanii sirna haarawa ijaaruudha. Humniti aangoo polotikaa dursee hin qabatin kamuu kaayoo barbaade galmaan gawuu hindanda’u. Kan bilisummaa barbaadus dursee aangoo furtuu polotikaa yoo dhuumfate malee bilisummaa hawwu angachuu hin danda’u. Kan biyya walabaa uuma jedhus dursee aangoo mootummaa dhuumfatu malee galma isaa dhaqqabuu hindanda’u. Kan sirna demokiraatawaa federaalawaa haqaa ijaara jedhus dura aangoo furtuu polotikaa gonfatutti hawwii isaa guutuu hindanda’u. Gaafiin hundumaa waliif galchuu gabu garuu «hanga mootummaan abbaa-irree TPLF aangoo irra jirutti hegereen hundumtuu hawwu abjuu taatee hafti.» kan jedhu . Osoo mootummaan Wayyaanee aangoo irra jiru karaan qurxaan biraa hinjiru. Kanaafuu aangoo furtuu polotikaa Wayyaanee harkaa fudhatanii hegeree iftuu bilisummaatii fi demokiraasii dhugaa fiduuf dursine muummee (source of political power) soqnee arguu qabna.
«Angoon polotikaa dhugaa eessaa madda?» gaafii jettu deebisuu irratti ilaalcha lamaa kan walii faallaa tayetuu qarayyoota siyaasaa (political elites) jedhutti muldhata:
1. Ilaalcha baaqqee yookin balashee (monolithic)—Ilaalchi baaqqeen kun maddi aangoo polotikaa muummee xiqqoo-tokkittii-hawaasa keessaa tuuta hagoo irraa madda jedhanii amanu. Uumaan daandiin polotikaa kun ittiin beekamu kan biraa ummata baldhaa fi biyyiti tuuta xiqqoo aangoo polotikaa hallanummaan dhuumfatee harkaa qabdu irratti irkatee jiraata jedhu. Yoo humniti hagoon aangoo polotikaa dhandhoontee harkaa qabdu tun diigamte ummataa fi biyyiti ni diigama jedhanii falfalu. Qaruutewwan siyaasaa balasheen masakaman hegeree dukkanooftuu isaan eeggatuu hegeree ummataa, biyyaa fi sabaa wajjiin walitti hidhanii laalu. Fakkeennaaf gaafii fi deebii dhiyeenna kana Abbay Tsehaayee fi Masfin Siyum Radio mootummichaa irratti kennan yoo xiinxalline dhugaa kana agarsiisaa. Marii isaanii irratti yoo mootummaan TPLF diigamte dachii fi samiin ni golgoloofti, Itoophiyaan Ruwaandaa fi Somaaliyaa taati jedhu. Humnoonni ilaalcha balashee akka TPLF qaban kana qofaa irratti hindhaabbatan. Amalli biraa kan isaan ittiin beekaman abbaan dhugaa harkaa qabuu fi karaa qajeelaa irra jiru nu qafaadhaa, ilaalchii fi xurreen biraa dhara jedhu (characteristically self-righteousness). Jijjiiraa haasawwaa fi misoomina (transformation) kan fiduu danda’u TPLF qofaadha yaadaa fi imaammata keenna jilbiifattanii waga’amuu qabdan jedhu. Yoo kan diddan farra guddinaa fi nagyaati jedhamtan dhabamtu jedhanii ummata diniinu.
Abbootiin ilaalcha calcallii akkanaa qaban aangoon utubaa sibiilaatii! Hin diigamu! Hin caccaphuu jedhanii yaadu. Kanaafuu TPLF aangoo polotikaa Itoophiyaa dhuumfaadhaan qabatee osoo si’a takkallee hinjijjiiramin jiraachuu qaba jedhanii murteeffatuu isaanii agarra.
Ummaan fokkataa fi hammaataa humnoota polotikaa ilaalcha baaqqeen masakanii «aangoon polotikaa afaan qawwee qofaa keessaa madda»jedhanii waan amananiif gaafii karaa nagayaatiin ummanni dhiyeeffatu hundumaafuu deebiin isaanii ajjeechaa. hidhaa fi reebicha. Aadaa Polotikaa Abyssiniyaa keessatti ilaalcha kanarraa kan ka’e aabbaa fi ilmis osoo hin hafin dhiiga walii bilatanii aangoo walirraa fudhatu. Faallaa kanaattiin sirna aadaa polotikaa Gadaa Oromoo keessatti aangoon polotikaa karaa nagaatiin dhaloota duraanii irraa gara dhaloota haarawaatti dabruu isaa hubannoota keessa galchuu feesisa. Baallii aangoo dabarsuuf abbaan ilma ajjeessee rarraguu hinqabu! Aadaa polotikaa Abyssiniyaa keessatti aadaa qabsoo polotikaa nagayaa gatii tokkollee akka hinqabne gadi-fageennaan hubatuu feesisa.
Mallattoon amaloota qarayyoota siyaasaa ilaalcha balashee kan biraa aangoon polotikaa gubbarraa gadi-dhufa malee dakanaa ol hinhojjatu (top-down homoginization) jedhanii yaadu. Kanaafuu TPLF demokiraasii warraaqxummaa. Mootummaa misoominaa, Transformation jedhee yaada isaa qofaa gubbarraa gadi lolaasaa gurra ummataa ducha.
Walumaagalatti Wayyaaneen (TPLF) hangafa qaruutewwaan ilaalcha baaqqeen (monolithic) dursaman haa tawuu malee humnoonni polotikaa Itoophiyaa kanneen ilaalcha kanaan masakama kan birollee jiraachuu isaanii hubatamuu qaba. Kun mooraa qabsoo Oromoollee dabalata. Ilaalcha kana amumarraa sirritti qoratanii yoo qabsoo irratti godhan malee hegeree iftuu bilisummaa irratti danqaraa guddaa akka tawu isaa ammumarraa tilmaamuu feesisa. Humnootaa fi qarrayyoonni ilaalcha baaqqee mootummaa TPLFin walfakkaatu qaban raachitii sirna abbaa-irree biraa tawuun akka hubatamuuf yaada kana mariif dhiyeesse. Barreeffama itti aanu keessatti ilaalcha sabbooqqoo (Polylithic), aangoon polotikaa madda tokko qofaa osoo hintayin madda dachaa-darabee qabdii (maddi aangoo ummata baldhaa) yaada jedhu xiinxalluu yaala.
Posted by Hasan Ismail at 5:23 AM No comments:
-Koree Qopheessituu Ayyaana Irreechaatiif
Dhimmii: Irreecha Bara 2009/2016 Ilaallata
Akkuma beekamu waggaa keessatti guyyaan Oromoon hawwiin eeggatu keessa guddaan ayyaana Irreecha ta'aa dhufeera. Ayyaanni sirna cunqursaatiin awwaalamee baduuf ka'e deebi'ee dagaaguun kan ummata miliyoona 4 ol biyya keessaafi biyya alaa irraa hawwatuufii irratti hirmaatu ta'ee jira. Kunis bu'aa Qabsoo Bilisummaa Oromooti.
Irreechi waltajjii sabboonummaan Oromoo itti calaqqisuufi jiddugaleessa Oromoon miliyoonotaan akka walarganii tokkummaa fi Oromummaa isaanii itti leellisan waan ta'eef mootummaan amma jiru yeroo dheeraadhaaf ukkaamsuudhaaf yaalaa ture. Haa ta'uu garuu cunqursaa kana hundarra dabruudhaan irreechi barabaraan guddachaa dhufnaan ukkaamsuurraa gara itti fayyadamutti tooftaa jijjiirachuun isaanii ni beekama. Kanas waltajjii ayyaanichaa dhuunfachuun qondaalonni olola mootummaa irratti geggeessuun waggoota as aanaa kana baratamaa dhufee jira. Gochi kun duudhaafi safuu Irreechaa kan diigu ta'us ummanni keenya obsaan irra dabraa as gaheera. Bara kana inumaatuu Irreechaayyu kan hirmaachuun danda'mu gara biiroo turizimii Oromiyaatin yoo dursanii galmaa'an qofa jedhamaa jira. Kun fudhatama tokkollee hin qabu. Irreechi baranaa akka sirnaafi nagaan raaw'atamuuf bifa armaan gadiitiin qophaa'uu qaba jenna:
1) Barri darbe kun kan ilmaan Oromoo dhibbatamaan irratti ajjeefaman, kumatamaan madaayaniifi manneen hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran ta'uu namuu quba qaba. Kanaaf akkuma ayyaanoota biroo ayyaanni Irreechaa baranaas kan gaddaa, kan warra wareegaman itti yaadannu, kanneen madaayaniifi hidhamaniif waaqa itti kadhannu ta'uu qaba.
2) Ayyaana kanarratti Abbootii Gadaafi manguddoo biyyaa malee qondaalli mootummaa kamiyyuu argamus ta'ee ka'ee dubbachuu gonkumaa hayyamamuu hin qabu.
3) Gadaan Oromoo kan sirnoota dimookraasii hundarraa filatamaa ta'ee addunyaa gubbatti jajamuuf hawaasummaafi siyaasaa hunda keessatti lammiilee hunda bifa walqixaatin waan hirmaachisuufi. Biiroon turiizimii Oromiyaa warra hirmaachuu barbaadu dursee kan galmeessaa jiruuf namoota mootummaaf amanamoo ta'aniin waltajjii gara fuulduraatti baasuun ummata kaan hiree dhoowwuuf akka ta'e ifa. Kun ammoo safuufi seera Gadaa kan Irreechaaf bu'ura ta'ee san diiga. Waan kana ta'eef yaanni ummanni duratti galmaayuu qaban jedhu gonkumaa fudhatama hin qabu.
Yaada armaan olii kana Gumiin Abbootii Gadaafi koreen qopheessituu Irreechaa sirritti xiinxaltanii hojitti akka hiiktan abdanna. Dhiibbaa mootummaatiin gorsa kana moggatti dhiisuun qondaalonni mootummaa akka dubbatan yoo hayyamtan, ummannii galmeen akka galu kan gootan yoo ta'e, humnoonni waraanaa ummata kan goolessan yoo ta'e, tarkaanfii ummanni bal’aan mirga isaa kabachiisuuf fudhatuufi gaaga'ama dhalatu maraaf itti gafatamummaa fudhachuuf akka of qopheessitan isin akkeekachiifna.
Kabajaafi Jaalala Oromummaa Waliin
Posted by Hasan Ismail at 6:13 AM No comments:
KHR–ABO walgahii isaa dhaabbataa Fulbaana 1 irraa kaasee hanga Fulbaana 11, bara 2016tti
gaggeeffachuun, gabaasaa dameelee dhageeffatee rakkoolee mumul’ataniif furmaataa fi
qajeelfama eega akeekeen booda, haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa
Oromiyaa, haala mootummaa faashistii Wayyaanee, haala sochiilee farra-faashistii wayyaanee;
kan naannoo ummata Amaaraa (Gondor, Goojjamii fi Walqaayit) keessatti adeemaa jiru, haala
sochii ummata Konsoo fi Majangir, Gambeellaa, Sidaamaa, Benshaangul, Ogaadeen, haala
Gaanfa Afrikaa fi Afrikaa guutummaatti , haala addunyaa fi kallattiin ammoo, haala sochii
qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa waliin waan wal qabate, dhimma dippilomaasii
Oromoo ilaalchiisee, gadii fageenyaan gilgaaluu fi xiinxaluun murtiilee kanaa gadii dabarsuun
walgahii isaa milkiin xumuree jira.
Jalqaba uumamuu Impaayeera Itoophiyaa irraa kaasee hanga hardhaatti ummatni Oromoo:
jimlaan ajjeeffamuu (sanyii duguuggaa), eenyumaan isaa haalamuu, hidhamuu, gidirfamuu,
saamamuu fi biyya isaa irraa humnaan ari’amuu irraa kan hafe faayidaan Oromoon sirna
Impaayeerummaa humnaan uumame kana keessatti argate kana jedhamee kan herregamu
tokkoo illeen hin jiru.
Adeemsa seenaa dukkanaawaa kana jijjiiruuf, ilmaan Oromoo bakka buusuun hin danda’amne
kanneen miliyoona baay’een lakkaawaman bilisummaa fi walabummaa saba goota kanaaf jecha
lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne dabarsanii kennaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo
(ABOnis), ilmaan Oromoo seenaa gootummaa kana dhaalaniin kan bu’ureeffameefi,
warreegama sabni Oromoo Jaarraa tokkoo fi walakkaaf baasaa jiru kanatti firii gochuufi.
ABOn, qabsoo hadhooftuu wareegama hedduu baasiste geggeesseen hardhaan tana, sagantaan
ABO ummata Oromootiin tinnifame, dhibdeelee ykn rakkoolee: siyaasaa, diinagdee,
hawaasummaa, aadaa fi dhiitama mirga dhala namummaa Impaayera Itoophiyaa jalatti ittiin
eelaa fuudhe ykn gidirfametti furmaata waaraa kan argamsiisuu dha. Kana dhugoomsuufis
ummatni Oromoo Kaabaa Kibbatti, Bahaa Lixattii fi handhuura Oromiyaa keessatti sagalee fi
ilaalcha siyaasaa tokkoon diina faashistummaan isaa ammaan dura bifa kanaan mul’atee hin
beekne dura dhaabatee FDG gara Fincila Xumura Gabrummaatti tarkaanfachiise. Kunis sodaa
injifatuun gootummaa abbootii isaa irraa dhaalen diinatti rifaatuu hamaa naqeen qabsoo isaa
ittisa irraa gara haleelaatti ceesisee jira.
ABOn, gootummaa fi tokkummaa sabni Oromoo harka qullaa, karoora fi sagantaa lafa
kaawwate irratti irkatuun Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) walitti fufiinsaan ji’oota 11f
adeemsiisaa jiru ni dinqisiifata. FXG kanaan, bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa
bakkaan gahuuf, tiksituu Impaayerichaa kan ta’e mootummaa faashistii Wayyaanee fi sirna
impaayerichi irratti ijaarames hundeen buqqisuun murteessaa dha.
تاريخ رقم Lakk.:017/stm/abo/2016
جبهۃ تحـرير اورومـى
Kunis ummata bilisoomeen, referendum walabaa fi bilisa ta’e irratti mirga hiree murteeffannaa
saba Oromoo mirkaneessuun taha. Waan taheef KHR-ABO kanaan ala furmaatni biroo akka hin
jirre sirriiti hubatee fi waliifis dhaamee, FXG kana toftaa hidhannoo fi hidhannoo maleettis
dhimma bahuun kan duraanii caalaatti akka finiinsu waamicha hatattamaa dhiheessa.
Mootummaan faashistii Wayyaanee kun kufee mirgi ummata Oromoo haga mirkanaahutti
hoogganummaa haga ammaatti kenne caalaa cimsee akka itti fufu ABO’n irbuu isaa irra
WBO, HOGGANOOTA , QONDAALOTA, MISEENSOTA FI DEGGERTOOTA ABO
Miseensota WBO, Hogganootni, qondaalotni, miseensootni fi deeggartootni ABO qabsoo
bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa keessatti adda duree ta’uun haalota rakkisoo
keessatti wareegama qaqqaalii baasaa as gahuun kanuma beekamu dha. Sadarkaa har’a qabsoon
irra gahee fi sabni keenya keessa jiruu, of kenniinsa keenya ol kaafnee qabsoo galiin gahuuf
yoom iyyuu caalatti diinna keenya awwaaluudhaan aangoo siyaasaa Oromoo mirkanneesuuf
bakka jirutti mootummaa faashiistii Wayyaanee haleeluu irratti akka bobbaanu waliif dhaamna.
MOOTUMMAA FAASHISTII WAYYAANEE FI ERGAMTOOTA SIRNICHAA
Mootummaa faashiistii Wayyaanee fi ergamtoota Wayyaanee kan ta’an Hoogganootni OPDO
kan sadarkaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irra guddaan isaanii, jijjiirraa
fakkeessaa xixiqqaa, kan akka Afaan Oromoo Afaan Finfinnee godhuu, Oromoota naannoo
Finfinnee irraa humnaan buqqa’aniif mana kennuuf labsa adda addaa baasuu dhaan, ummata
humnaan hiriira baasuuf karoora qaban. Kun gaaffii bilisummaa Oromoo fi walabummaa
Oromiyaaf gonkumaa deebii tahuu waan hin dandeenyeef, karoora kana duubaan shirri jirus
ummata Oromoo afanfaajjessanii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuun sirna
gabroomfataa Wayyaanee ummata Oromoo irra tursiisuu fi amanamummaa sirnichaaf qaban
ittiin mul’ifatuuf murteeffatuu mirkaneessa.
Miseensoota OPDO kanneen sanyii duguuggaan saba isaanii itti dhagahamuun sabni isaanii
akka hin miidhamne hojjachaa turanii fi hojjachaas jiran ni dinqisiifata. Ummatni Oromoo shira
hoggannoota OPDO fi gooftolii isaanii kan summii dammaan dibame fakkatuu olitti kaa’ame
kanaan akka hin dagamne yaadachiisaa, karoora mootummaan faashiistii TPLF baafate kana
fashalsiisuu dhaan, amna gara bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti godhaa jiru
kana cichoominaa fi shaffisaan itti fufee xumura akka itti godhu ABO’n gadi jabeessee dhaama.
Kana waliin Oromoota badii isaanii irraa barachuu hanqatuun lammii isaanii irratti yakka
raawwataa jiranis ABO’n akeekkachiisa.
ILMAAN OROMOO WARAANA MOOTUMMAA WAYYAANEE KEESSA JIRANII
FI HOJJATTOOTA MOOTUMMAA SADARKAA HUNDAA.
Akkuma dhalli Oromoo hundi beekuu fi hubatutti, sanyii duguuggaan saba Oromoo irratti eega
labsame yeroon isaa bubbulee ti jira. Hardhaan tana, lubbuun dhala Oromoo, kan Wayyaanoti
aggammii itti shaakalan ta’ee jira.
Haalli kun ammoo, kan dhala Oromoo hunda irriba fi jireenya dhorku ta’uu qaba. Waan
ta’eefis, ilmaan Oromoo kan waraana Wayyaanee keessa jirtani fi kanneen caasaa mootummaa
sadarkaa Federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hojjettan of gurmeessuu fi wal
gurmeessuun qabsoo sabi keessan bilisummaaf geggeessaa jiru waan dandeessan hundaan akka
cinaa dhaabbatan ABO’n yaamicha lammummaa dhiheessa. Yoo itti gaafatama kana hin baane
garuu, fuula duraatti komii saba Oromoofi gaafatama seenaa jalaa akka isin hin baafne
ammumaa isiin yaadachiisuun dirqama jennee amana. Hardhaan tana, qabsoo bilisummaa
Oromoo fi walabummaa Oromiyaa bira yoo hin dhaabbanne, yeroon ummata ofii waliin
dhaabatanis yoommi laata? gaafii jedhuus deebbisuun dirqama keessan akka ta’e jala muruun
ABOn isiin hubachiisna.
ABOn humnoota siyaasaa Impaayeera Itoophiyaa, kanneen farra mootummaa faashiistii TPLF
ta’an mara qabsoo isaan lafarratti gochaa jiran ni kabaja. Kanneen hiree murteeffannaa
ummatoota Impaayericha keessa jiran akka akeekaatti kabajuuf murteeffatan ammoo ABOn
bifa addaatiin ilaala. Kanaafis,Tumsi Bilisummaa fi Dimookiraasii Ummattootaa (PAFD)
ijaarame. Haaluma kana irratti hirkachuun, dhaabootiin siyaasaa biyyattii keessatti bifa
mul’ataan lafarratti hojiin beekaman sagantaa siyaasaa walii waliif kabajuun, diinna waloo
kan ta’e mooutmmaa faashistii Wayyaanee irratti xiyyeeffatuun mootummaa gara jabinni isaa
daangaa hin qabne kana aangoo irraa waliin akka kaafnu irraa deebi’ee yaamicha isaa
Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa bakkaan gahuuf amni hafe xiqqaa ta’us,
dirqamni yeroo amma nu irraa eegamu ulfaataa dha. Haala ammaa keessatti, dirqama fuuldura
keenya jiru injifatnoon xumuruuf, dirmannaa ABO’n barbaadu godhuu irraa kan if nama
qusachiisuu sababi kamuu jiraachuu hin malle. Haalli keessa jirru, haala jiraachuu ykn
dhabamuu keessaa filachuu ti. Dhabama irraa saba keenya oolchinee rakkoo dhuunfaa qabnu
furachuun gamnummaa ta’uu hubatuun, miseensotni fi deggertootni arma dura ABO keessaa
sababaa adda addaatin bahan, hatattamaan dhaabatti akka deebi’an ABO’n yaamicha
lammummaa fi biyyummaa isaaniif dabarsa.
Mootummaa faashiistii gabroomfataa Wayyaanee Oromiyaa irraa buqqisuun, bilisummaa fi
nagaa waaraa ummata Oromoof argamsiisuuf, humna namaa fi qabeenyaa ummata Oromoo
tokkoomsuun murteessaa ta’uu isaatti amanuun, dhaabota siyaasaa Oromoo walaba ta’an
gidduutti waliigaltee fi walhubannoo irra gahuun ni yaadatama. Waliigaltee fi walhubannoon
kun akka hojiitti hikamuuf, bakka bu’oota dhaabota kanaa irraa koreen ijaaramte, Koree
qindeesituun Jaarmayooli Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa (KQ-JBWO) waliigaltee
kana hojiitti hikuu fi hojii irratti akka milkooftuuf ABO qooda irraa eggamu akka gumaachu
SOCHII NAANNOO UMMATA AMAHARAA ( Gondor, Gojamii fi Walqaayt)
Sochiin farra mootummaa faashiisti Wayyaanee ummatni Amahaaraa naannoo Gondorii fi
Gojjamitti geggeessaa jiru, sochii mirgaa ta’uu ABO’n ni amana. Haa ta’u malee,
mootummaan Wayyaanee karaa irraa maqfame malee gaaffiin kun deebii argachuu hin
danda’u. Waan ta’eef, kallattii hundaan mootummaa Wayyaanee jilbeenfachiisuuf ciminaan
akka irratti hojjetamuu qabu ABO’n yaadachiisaa, ajjeechaa, hidhaa fi gidirfamuu ummata
naannoo Amaaraa irratti faashiistoota Wayyaaneetin gaggeeffamaa jiru gadii faggeenyaan
Saaminsa fi eenyummaa isaanii haquuf gochaa mootummaan faashistii Wayyaanee irratti
raawwataa jiru mormuun, qabsoo sabni Koonsoo fi Majangir geggeessaa jiru, ummatni
Oromoo fi dhaabni isaa ABOn ni dhinqisifata; biras ni dhaabbata. Qabsoon sabni Konsoo fi
Majangar gaggeessaa jiran, qabsoo haqaatis jedhe amana. Itti dabalees: ajjeechaa jumlaa,
hidhaa fi gidirsaa saba Konsoo fi Majangar irra gahaa jiru ABOn cimsee balaaleeffata.
Mirgi abbaa biyyummaa isaa sarbamuu, nagayaan jiraachuu dadhabuu irraa hawaasini Oromoo
biyya alaa jiraatu kan baqattummaaf isa saaxile hubatuu dhaan biyya isaa deebifatuun
murteessaa ta’uu amanee qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf tinnisa
gochaa har’a gahe. ABOn gumaacha kanaan duraa dinqisiifataa, qabsicha injifatnoon
guduunfuuf ammoo dirqama addaa haalli yeroo ammaa gaafatu bahuuf hawaasni keenya ala
jiru gumaacha qabsoo dachaa dachaan akka ol kaasu Koreen Hojii Raawwachiiftuu ABO
jabeesee waamicha dabarsa.
YAKKA SANYI DUGUUGGAA (genocide) MOOTUMMAA WAYYAANEE
GAGGEEFFAMAA JIRU ILAALCHISEE.
Mootummaa faashiistiin TPLF mootummoota impaayeericha keessatti kana dura mumul’atan
hunda caalaa gara jabinaan kan guutame ta’uu isaa kan hojiin agarsiisaa jiru ta’uu dhaabootni
mirga dhala namaaf dhaabatan hundi raga itti bahaa jiran. Sanyii duguuggaan kallattiin kan
saba Oromoo irratti qiyyeefatame ta’uu, hojii faashiistootni TPLF kan ji’oota 11 ilaaluu fi
tarkaanfii isaannii xinxaluun gahaa dha. Sanyyi duguuggaan kun ummatoota naannoo
Gambellaa, Beenshangul, Sidaamaa, Ogaden, fi ummata Konsoo fi Majangar irrattis bal’inaan
kan gaggeeffamaa turee fi jiru dha. As kaluu kana ammoo ajjeechaan jumlaa kan saba Amaaraa
irratti dabalataan xiyyeeffatame gadi bahuun raga dabalataa ti jennee ammana. Waan ta’eefis,
ajjeechaa suukanneessaa adeemsifamaa jiru kana gareen walaba ta’ee qoratee mootummoota
gamtoomanii fi dhadacha mana heera addunyaaf (ICC) akka dhiheeffamu ABOn jabeesee
hawaasaa addunyaa mara gaafata.
Kanuma waliin, dhaaboota mirga dhala namaaf dhaabatan,,kanneen sanyii duguuginsi Oromoo
fi saboota biroo irratti geggeeffamaa jiru yakka ta’uu hubatanii iyyaannaa dabarsaa jiran
ABOn dinqisifataa fi galateeffataa hojii eebbifamaa kana cimsanii akka itti fufan gaafata.
Posted by Hasan Ismail at 9:26 AM No comments: